Nidaamka Bixinta Lymphatic - Sorrento Therapeutics
Sofusa® Nidaamka Bixinta Lymphatic (S-LDS) waa hab cusub oo daaweyn ah oo loogu talagalay in lagu gaarsiiyo daawooyinka la isku duro si toos ah lymfatic iyo capillaries nidaamsan oo ka hooseeya epidermis iyada oo loo marayo microneedle iyo nidaamka microfluidics.
Nidaamka Bixinta Lymphatic Sofusa Guudmarka. Booqasho www.sofusa.com
Nuugista La Wanaajiyey
Si ka duwan irbado dhaqameed, nidaamka Sofusa ("faleebo jilicsan oo jilicsan") ayaa awood u siinaya nuugista kontaroolada ee unugyada lenfigga ee yaryar iyo kuwa habaysan ee ka hooseeya epidermis.
Nanotopography (aad loo weyneeyey)
Filim khafiif ah oo nanotopography ah oo lagu dabaqay microneedles ayaa keenaysa koror aad u weyn oo nuugista molecules waaweyn vs microneedles aan la daboolin.
Moodooyinka hore ee kiliinikada marka loo eego duritaanka dhaqameed, Sofusa waxay muujisay jawaab celin caafimaad oo soo hagaagtay iyada oo korodhka uruurinta lymphatic iyo hoos u dhigista habka nidaamka.1.
(1) Xogta ku jirta faylka - Daraasado badan oo hore oo caafimaad oo ku lug leh etanercept, trastuzumab, CTLA-4, PD-1, iyo PD-L1